पलकै कारण दुर्गेश थापालाइ ठुलो झड्का – Sandes Post
पलकै कारण दुर्गेश थापालाइ ठुलो झड्का
April 9, 2022 668
काठमाडौं – नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले नि खेद्छ ।’ यतिबेला गायक तथा मोडल दुर्गेश थापाको हकमा यो उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुँदै गएको छ । पल शाह प्रकरणमा जोडिएपछि उनी पलका फ्यानको आँखाको तारो बनेका छन् । यही कारण उनले हातमा रहेका प्रोजेक्टहरु समेत गुमाउँदै गएका छन् । केही मेला-महोत्सवहरुले त उनलाई बहिष्कार नै गरेका छन् ।
यसैक्रममा, उनलाई बैशाख १ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘ए मेरो हजुर ४’बाट समेत निकालिएको छ । फिल्मको एक गीतमा उनले र्‍यापरको भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । उक्त गीत केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्माण टिम थियो । तर, दुर्गेशलाई प्रस्तुत गरिएको गीत सार्वजनिक गर्दा फिल्मलाई असर पर्ने बुझेपछि निर्माण टिमले उनी देखिएको गीत नै हटाएको छ ।
दुर्गेश फिचर भएको गीतको ठाउँमा निर्माण पक्षले जी-बब नामले चिनिने ‘मिलेन लेभल तेरो’ गीतका गायक सुदीप भण्डारीको स्वर, शब्द तथा संगीतमा तयार भएको गीतलाई राखेको छ । त्यस्तै, गीतको भिडियोमा गायक भण्डारी आफैं फिचर छन् । बुधवार उक्त गीतको काठमाडौंको एक रेस्टुरेन्टमा छायांकन भएको थियो । गीतलाई शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा निर्माण टिम छ ।
लकडाउनमा समयमा निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापाले फिल्मको एक गीतमा अभिनय गराउन दुर्गेशसँग कागजी सम्झौता गरेका थिए । त्यसबेला दुर्गेशले जुन गीत छोयो त्यही हिट हुन्थे । तर, पल प्रकरणमा जोडिएपछि उनको करिअर नै डामाडोल भएको छ । फिल्मबाट आफूलाई हटाएको कुरा सार्वजनिक नगर्न दुर्गेशले निर्मातासँग विन्ती गरेको समेत बताइन्छ ।
तर यता, फिल्मका निर्माता सुनिल कुमार थापाले फिल्ममा दुर्गेशको गीत नै नभएको बताएका छन्। ‘फिल्ममा दुर्गेश थापाको गीत छँदै छैन, कसरी हटाउनु। उनले फिल्ममा डेढ मिनेट लामो केमियो भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अहिलेसम्म हामीले उनलाई हटाउने बारेमा सोचेको छैनौं। फिल्म प्रदर्शन भएपछि दर्शकको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ, त्यही अनुसार काम गर्छौं,’ निर्माता थापाले भने।
‘मिलेन लेबल तेरो बाउ बोला ए’ र्‍याप गाएर चर्चामा आएका जी-बब नामले परिचित सुदिप भण्डारीले ‘ए मेरो हजुर ४’ का लागि गीत गाएका छन्। गीतमा उनकै शब्द तथा संगीत रहेको छ। जी-बबले फिल्ममा गीत गाएसँगै पल शाह प्रकरणमा मुछिएका दुर्गेश थापाको गीत हटाएको चर्चा चलेको छ।
झरना थापाले निर्देशन गरेको फिल्ममा अनमोल केसी, सुहाना थापा, सलोन बस्नेत, रवि गिरी, सरोज खनाल, लुनिभा तुलाधर, रक्षा गौतमलगायत कलाकारहरूको अभिनय छ। फिल्मको कथा निर्देशक झरना थापाले लेखेकी हुन्।
सुनिल कुमार थापाले निर्माण गरेको फिल्ममा पटकथा र संवाद लेखनमा निर्देशक थापालाई स्व. निर्देशक छेतेन गुरुङ, मन्दिप गौतम, प्रतिक पौडेल, बाबुराम दाहाल, उपकार पाण्डे र माधव शर्माले सघाएका छन्। ‘ए मेरो हजुर ४’ वैशाख १ गतेबाट प्रदर्शन हुँदैछ।
Prevनेता होइन म काठमाडौंको मेयर बन्न खोजेको होः बालेन शाह
Nextपल शाहको भिडियोलाई चुम्दै पूजाले यस्तो लेखिन्
भक्तपुरमा आफ्नै घरको छत काल बन्यो लक्ष्मीको
मलेसियाको Volvo Sdn ले बेसिक तलब १८ सय दिने, नेपाली कामदारको ठूलो माग
रवि लामिछानेसम्मको साथ पाएका बालेनलाई चुनावको मुखैमा आफ्नैबाट धोका, लाग्यो नमिठो धक्का !
अनुहारमा यसरी दल्नुहोस् केराको बोक्रा, १५ मिनेटपछि पाउनुहुनेछ यस्तो नतिजा !